Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Sierra Leone » Ọ dịkarịa ala, mmadụ 99 nwụrụ na mgbawa Sierra Leone
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Safety • Akụkọ Sierra Leone • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọ dịkarịa ala, mmadụ 99 nwụrụ na mgbawa Sierra Leone.
Ọtụtụ n'ime ndị ahụ a metụtara bụ ndị a na-ebo ebubo na ha na-anwa ịchịkọta mmanụ ụgbọala ka ihe mberede mere n'okporo ụzọ.
Mgbawa nke ụgbọ ala ụgbọ ala butere nnukwu ọnwụ na isi obodo Sierra Leone bụ Freetown.
Mgbawa a mere n'isi ụtụtụ Satọde ka ụgbọ ala ụgbọ mmiri ahụ na ụgbọ ọzọ kụkọchara.
Enwere mmadụ 30 ndị gbara ezigbo ọkụ n'ụlọọgwụ ndị a na-atụghị anya na ha ga-adị ndụ.
Dị ka ndị isi ụlọ ebe a na-edebe ozu n'ime Sierra LeoneIsi obodo, ihe karịrị mmadụ 90 anwụọla n'ihe mberede ụgbọ mmanụ gbawara na Freetown n'ụtụtụ a.
Ihe mgbawa nke gwongworo tankị dị na Freetown butere nnukwu ọnwụ, ebe egwu na-atụ mmadụ 100 nwụrụ.
Mgbawa a mere n'isi ụtụtụ Satọde ka ụgbọ ala mmanụ ụgbọala dakọrọ ụgbọ ọzọ na ndị mmadụ gbakọtara ịnakọta mmanụ na-agbapụta.
"Ndị bi nwara ịchịkọta mmanụ ụgbọala na-agbapụta n'ụgbọala ahụ bụ ihe mgbawa ahụ mechara," Onye isi obodo Freetown Yvonne Aki-Sawyerr dere na nkwupụta na Facebook, mana emechara kpochapụ akụkụ a.
Ihe onyonyo a na-egosi ndị nwere obi ụtọ guzoro n'akụkụ ụgbọ mmiri ahụ, ụfọdụ na-ebu ite, bụ nke eboro ebubo na e buuru ya obere oge tupu mgbawa a na-ekwu na ndị mmadụ na-anakọta mmanụ na-akwado.
Ndị ọrụ Freetown na-akọ na ụlọ ozu obodo nwetara ozu 91 ka mgbawa ahụ gbawara ruo ugbu a. Isi nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdachi Ọdachi Mba (NDMA) kwuru na ọ bụ "ihe ọghọm dị egwu, dị egwu."
N'ime awa ole na ole ka ihe ahụ mechara, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ gọọmentị kwuru na-arị elu nke ukwuu. Onye osote onye isi ala Mohamed Juldeh Jalloh kwuru na opekata mpe mmadụ 92 nwụrụ ka ha gachara ụlọọgwụ abụọ natara ndị ihe metụtara.
Mmelite mechara degharịa ya na 95. Otu onye osote minista ahụike mechara kwuo na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ na ya dị 99.
Dị ka onye ọrụ ụlọ ọgwụ Connaught si kwuo, e nwere mmadụ 30 ndị gbara ezigbo ọkụ na-atụghị anya na ha ga-adị ndụ.
Onye nnọchi anya onye nnọchi anya ya Junisa Precious Gbeteh Sallu Kallon – GGA na-esonye n'ịdị n'otu narị narị mkpụrụ obi furu efu n'ihi mgbawa mmanụ ụgbọala PMB Wellington dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke isi obodo m hụrụ n'anya - Freetown, Sierra Leone.
Okwu si Sierra Leone
Ọ bụ #blackfriday maka Junisa Precious Gbeteh Sallu Kallon, n'onwe ya dịka Junisa Precious Sallu Kallon amụtala mfu ihe onwunwe na ndụ ezigbo ndị enyi na ndị ikwu tere aka n'ime ọtụtụ mmadụ nwụrụ n'ihi mgbawa nke ụgbọ mmiri dị ft anọ.
Ọ bụ ụbọchị dị nsọ na izu ụka ga-emenye akụkọ ihe mere eme anyị egwu dị ka Freetonian ruo mgbe ebighị ebi. Dị ka m mụtara site na Freetown City Council anyị nwere 92 merụrụ ahụ (48 na Connaught Hospital, 6 na Choithrams Hospital, 20 na 34 Military Hospital, 18 na Emergency Hospital); anyị atụfuola mkpụrụ obi iri itoolu na anọ na Connaught Mortuary; nwere ike ịbụ ozu 94 ka nọ n'ebe mgbawa ahụ mere.
Junisa Precious Sallu Kallon chọrọ ịkele nzaghachi ngwa ngwa ngwa ngwa nke ndị uwe ojii Metropolitan na onye osote onye isi obodo na Freetown City Council, Gọọmenti dum nke Sierra Leone karịsịa National Disaster Management Agency - Sierra Leone (NDMA), bụ onye na-eduzi nzaghachi.
Alain St. Ange, onye isi Òtù Na-ahụ Maka Nlegharị anya n’Africa nyere nkwupụta na-ekwu, sị: “Mmetụta kasị ukwuu anyị nwere n’ebe ndị mmadụ na ndị ọchịchị Sierra Leone nọ n’ọdachi a dị ná mba a.”